Malunga nathi -Shijiazhuang Hantex International Co, Ltd.
Sigxile ekuthumeleni iimpahla zangaphandle, iimveliso zasekhaya, izinto ezahlukeneyo zokuKhuthaza kubathengi kwihlabathi liphela.
I-Hantex International Co Ltd. ibekwe kwikomkhulu lephondo lase-Hebei, indawo ebonakalayo yokuLungiswa kweeMpahla kunye neeMpahla e-China. Kuhola wendlela, ziiyure ezi-3 emantla ukuya kwisikhululo senqwelomoya saseBeijing, kunye neeyure ezi-6 emantla-mpuma ukuya kwizibuko laseTianjin, kunye neeyure ezisi-8 eMpuma ukuya kwizibuko laseQingdao.
Kunye namava iminyaka eli-15 'kurhwebo lwangaphandle, siye zibanga kwamanye amazwe Iimpahla, iimveliso zasekhaya, izinto ezahlukeneyo Promotion kubathengi kulo lonke ihlabathi. Kwakhona siphuhliswe ngempumelelo kwiimveliso zoMatshini kunye neze-elektroniki ukusukela ngo-2008. Izinto zethu eziphambili zibandakanya amalaphu, impahla yaseKhaya, iyunifomu, Ngokubanzi, ibhatyi, iihempe, iibhulukhwe kunye nezibhulukhwe ezimfutshane, iimpahla zemvula, ukuphosa okanye ukuxolela kunye neendawo zomatshini, iiPompo, iLed SMD, ukukhanya kwezibane , Windmill yelanga, Izipho zelanga, njl. Ukuthengisa kwethu ngonyaka kumalunga ne- $ 8 yezigidi.
Njengenye yenkampani ethumela ngaphandle, ngokuthe nkqo sidibanisa itekhnoloji, umzi mveliso kunye norhwebo. Okwangoku, besinemizi-mveliso emithathu, enye yeempahla, enye yeempahla zePlastiki kunye nenye yokuphosa. Kananjalo sibambe ngaphezulu kweefektri ezingama-50 ezibandakanyekayo kwimathiriyeli yomqolo, izincedisi kunye nemizi-mveliso njengamaqabane alungileyo ngeenxa zonke eChina.
Ukulungiswa kwendlu ngaphakathi kuMgangatho
Zintathu i-QC kwisebe lethu lezorhwebo kunye ne-2 QC kuzo zonke iifektri zethu. Oku kusivumela ukuba silawule ngononophelo lomgangatho kwaye siqinisekise ngexesha lokuhanjiswa.
Siyathembisa ukuKubonelela nge
Ingxelo yeMishini yeNkampani
3) Izambatho zomsebenzi, ezinje ngeehempe, iKapa kunye neApron, iJacket kunye neParka, ibhlukhwe, iibhulukhwe ezimfutshane kunye
Iindidi zeMpahla yokuKhanya, ezikwiZatifikethi ze-CE, EN470-1, EN533, EN531,
BS5852, NFPA2112 kunye ne-ASTM D6413.
1) Inkonzo ebalaseleyo, uMgangatho oPhakamileyo kunye namaxabiso oKhuphiswano
2) Phendula kwangoko, iSampula ngaphakathi kweentsuku ezi-7, ukuhanjiswa ngexesha.
3) i-odolo encinci yamkelwe.
Inkonzo idala ixabiso, uphawu olufezekisiweyo lobuchule
Yasekwa ngo-2008, Hantex ibekwe e Shijiazhuang kwisixeko kwiPhondo Hebei, nto leyo iziko ebalulekileyo kushishino lwempahla eyolukiweyo kunye neempahla e China. Yiyure enye ukuya kwisixeko saseBeijing ngololiwe ohamba ngesantya esiphezulu. Ngeelori, ziiyure ezine ukuya eTianjin Port kunye neeyure ezintandathu ukuya eQingdao Port kuHola wendlela.
Ngamava angama-20ye kurhwebo lwamanye amazwe, sijolise ekuthumeleni iimpahla ikakhulu iSoft-shell Clothing, i-Ski Garments, Down Garments, Fashion Rainwear, Work Cloths and Household Products to Europe, USA and South America, Africa, South-east Asia and Middle East, njl.
Njengenye yeenkampani ezikhokelela ngaphandle, sibambe iifektri ezingaphezu kwe-100 njengamaqabane alungileyo macala onke e-China, asebenza kwi-Textile, amalaphu ePlastiki, iingubo, i-Hardware njl.
Ukubonisa kwiCanton Fair
Nceda ukhangele kwigumbi lethu lokubonisa ukuze ufumane into oyifunayo, emva koko usithumelele i-imeyile namhlanje. Imibuzo yakho iya kuthakazelelwa kakhulu kwaye ii-odolo ze-OEM / ODM zamkelwe.
Ifowuni. + 86-18932936396, 18932936328,18932939011
Ifeksi. + 86-311-87823360